युगसम्बाद साप्ताहिक - यही हो शहीदको सम्मान ?
Monday, 01.27.2020, 06:33pm (GMT+5.5) Home Contact
यही हो शहीदको सम्मान ?
Tuesday, 01.31.2017, 11:35am (GMT+5.5)
अस्ति आइतबार शहीद दिवस मनाइयो । सरकारले यो दिन सार्वजनिक बिदा दिएर शहीदहरूको सम्मान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका उच्च पदस्थहरू शहीद स्मृति प्रतिष्ठानमा गएर फूलमाला चढाएर उनीहरूका योगदानका विषयमा चर्का भाषण गरे । तर, शहीदले देखाएको बाटो हिंड्ने प्रण भने गर्दैनन् । लामो समयदेखि यो क्रम चलिरहेको छ । नेपाली जनताले २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२।०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा ठूलो कुर्वानी गरे । तर युगान्तकारी परिवर्तनका ती घटनापछिका राजनीतिक परिघटनाले राष्ट्रिय चिन्तनधारको मूलबाटो समात्न सकेनन् । नेपालको राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्न सकेन । नेपालका राजनीतिक नेताहरूको सत्ता लोलुपताको कमजोरी बुझेका वैदेशिक शक्तिहरूले मौकापरस्त भूमिका खेल्दै उनीहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीति अपनाए ।
राष्ट्रको चौतर्फी हितका लागि आवाज बुलन्द गर्ने शहीदहरूको शरीर नासिए पनि उनीहरूको आत्मा जीवितै छ, उनीहरूको विचार जस्ताको तस्तै जहाँको तहीँ अमर छ । अभाव त्यो विचार र सपनाको पूर्णता मात्र हो । अहिले मनमा थोरै मात्र राष्ट्रिय चिन्तन हुनेहरू ती महान् आत्माहरू झल्झल्ती सम्झिरहेका छन् । तर शहीदहरूकै वलिदानीबाट सत्तामा पुगेका र आफूलाई नेता बनाउन पाएकाहरूले केवल वर्षमा एकपटक मात्र शहीदको सम्झना गर्छन् । बाँकी समय आफ्नै स्वार्थमा रमिरहन्छन् । प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यो अवधिमा शहीदको आत्मसम्मान गरिने खालका कुनै कार्यक्रम लागू गरिएन । उनीहरूलाई केवल वर्षको एकचोटी स्मरण गर्ने ‘कुलदेवता’का रुपमा मात्र प्रतिस्थापित गराइयो । यसैकारण त मुलुक अहिलेको यो नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
आज मुलुक चौतर्फी संकटमा छ । आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरू बाह्य इशारा र निर्देशनमा मुलुक ध्वंश गर्ने बाटो अख्तियार गरिरहेका छन् । देशको अवस्था विकराल छ, राष्ट्रियता चारैतिरबाट प्रहारको निशाना बनिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थ त्यसै त्यसै विलिन हुन पुगेको छ । राजनीतिक रुपमा मुलुक प्रतिक्षण क्षयोन्मुख अवस्थामा छ भने आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको वर्णन गर्नै नसकिने भैसकेको छ । इमान्दारिता, सदाचार, नैतिकता हराइसकेको छ । आफू र आफ्नो वाहेक हामी र हाम्रो भन्ने भावना मरिसकेको छ । नेपालीको विशेषता नै बनेको ‘अनेकतामा एकता’ अहिले ‘एकतामा अनेकता’को रुपमा फोस्रो नारा भएको छ । यस्तो विकराल अवस्थामा महान् शहीदहरूका आत्मा कति रोएको होला ? त्यसतर्फ विचार पु¥याउने कसले ?
‘खोलो त¥यो लौरो बिस्र्यो’ भन्ने नेपाली लोकोक्ति यतिबेला नेपाली राजनीतिमा निकै चरितार्थ भएको छ । जसको बलिदानीका कारण नेताहरू अहिलेको हैसियतमा आइपुगेका छन् उनीहरूको संघर्ष, त्याग र राष्ट्रभक्तिलाई स्मृतिमा राख्न सकेनन् । मुलुकको एकता छिन्नभिन्न पार्ने शहीदको संघर्षको एजेण्डा थिएन । शहीदहरूले मुलुक टुक्रा टुक्रामा विभाजित गर भनेका हैनन्, मुलुकमा विदेशी हैकम बढ्न देउ पनि भनेका छैनन् । राजनीतिक नेताहरूबीच सत्ता र कुर्सीकै मात्र खेल भैरहोस् पनि भनेका छैनन् । शहीदको सपना नेपाल र नेपाली जनताको सुख, शान्ति र समुन्नति मात्रै थियो । तर त्यसैलाई जिम्मेवारी लिएकाहरूले लत्याइरहेका छन् । नेपाल र नेपालीको कल्याणका लागि शहीदहरूले देखाएको मार्गलाई पछ्याउनुको साटो दुत्कारिएको छ ।
राष्ट्रको समुन्नति, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा र एकता सपुतहरूको त्याग र बलिदानीवेगर सम्भव हुँदैन । राष्ट्रका लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिनेहरूलाई शहीद भनिन्छ । यिनै शहीदको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष पनि सप्ताहव्यापी रुपमा ‘शहीद सप्ताह’ भनेर चार महान शहीदहरूको शालिकमा गएर माल्यार्पण गरियो । औपचारिकतामा सीमित शहीद दिवसले कसैलाई झक्झक्याएको पनि छैन । किनभने आज दलपिच्छेका शहीद, जातपिच्छेका शहीद, सम्प्रदायपिच्छेका शहीदको लर्को लागेको छ । जे भए पनि ज्ञात–अज्ञात रुपमा मुलुकका लागि संघर्ष गर्ने र बलिदानी दिनेको अवमूल्यन गर्नहुँदैन । त्यसैले ती महान आत्माप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !